अख्तियारको चङ्गुलबाट कसरी उम्किए गाउँपालिका अध्यक्ष डम्बर बहादुर ? - The Public Today
अख्तियारको चङ्गुलबाट कसरी उम्किए गाउँपालिका अध्यक्ष डम्बर बहादुर ?
ढल्केवर, फागुन २३ गते । म भष्ट्राचार गर्दिन, अरुलाई पनि गर्न दिन्न । अहिले सरकारी कार्यालयका भित्ताहरुमा यस्ता स्टिकरहरु पर्याप्त मात्रामा देख्न पाइन्छ । सुन्य भ्रष्टाचारका नारा बोकेको प्रधानमंन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको ३ वर्षे कार्यकालमा नगण्य भ्रष्टाचारका उदाहरण छन् । भष्ट्राचार र घुस खोरीहरुले अख्तियारको आँखा छल्नुलाई अहिले नौलो मानिदैन् । यसको पछिल्ला ज्वलन्त उदाहरण बनेका छन् धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बर बहादुर राउत क्षेत्री ।
सेवाग्रही बाट लिएको घुस रकम फालेर भागेका क्षेत्री अहिले सम्म फेला परेका छैनन् । उनले गाउँपालिकामा भएको कामको सिलसिलामा ठेकेदार सँग ८ लाख रकम घुस बापत लिए पनि सो रकमलाई पचाउन भने सकेनन् । उक्त रकम फालेर भागेका क्षेत्रीलाई पाँचदिन बितिसक्दा पनि उनलाई पक्रन सकेन ।
अध्यक्ष राउतले भवन निर्माण सम्पन्न भएपश्चात भुक्तानी दिने प्रयोजनका लागि सेवाग्राहीसँग अतिरिक्त रकम माग गरिरहेको भन्ने उजुरीका आधारमा आयोगको केन्द्रीय कार्यालय टंगालबाट खटिएको टोलीले छापा मार्दा उनी चढेको गाडीबाट ८ लाख रुपैयाँ बरामद भएको अख्तियारले जनाएको छ ।
गाउँपालिकाका सवारी चालक विरबहादुर मगरले चलाएको प्र.२–०२–००१ झ ०००२ नम्बरको कालो रंगको स्करपियो गाडी धनुषाको क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका–५ स्थित बाटोमा जाँच गर्दा ८ लाख रुपैयाँ फेला परेको थियो । गाडीमा जाँच गर्न लागेपछि अध्यक्ष राउत भने भागेका थिए ।
फरार अध्यक्ष राउतलाई खोज्न अख्तियारले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, इलाका प्रहरी कार्यालय सुखवा महेन्द्रनगर र इलाका प्रहरी कार्यालय ढल्केबरको प्रहरी टोलिको समेत सहयोग लिएको थियो । व्यापक खोजतलास गर्दा समेत राउत अहिले सम्म फेला परेका छैनन् ।
आफू चढेको गाडीबाट राउत हामफालेर भागेपछि स्थानीयमा अख्तियारप्रति विभिन्न शंका उब्जेको छ ।